बेन्जेमाको ह्याट्रिकमा रियलको सहज जित, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
एजेन्सी । औडी कपको तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडले सहज जित निकालेको छ। बुधबार भएको खेलमा फेनरवाचीलाई ५–३ गोल अन्तरले पराजित गर्दै रियल प्रतियोगितामा तेस्रो बनेको हो ।
रियलको जितमा करिम बेन्जेमाले ह्याट्रिक गरे। उनले खेलको १२, २७ र ५३ औं मिनेटमा गोल गर्दै टिमलाई सहज जित दिलाए। खेलको छैटौ मिनेटमा ग्यारी रोड्रिग्वेसको गोलबाट फेजेरवाचीले अग्रता बनाएको थियो । त्यसपछि १२ औ मिनेटमा बेन्जेमाले खेल बराबरीमा ल्याए ।
२७ औं मिनेटमा बेनजेमाले दोस्रो गोल गर्दै रियललाई २–१ को अग्रता दिलाए । ३४ औ मिनेटमा नबिल दादरले खेल २–२ को स्थितीमा ल्याए । ५३ औ मिनेटमा बेन्जिमाले गोल गर्दै ह्याट्रिक पुरा गरे । ५९ औ मिनेटमा ओजान तुफानले खेल ३–३ को स्थितीमा ल्याएका थिए ।
६२ औ मिनेटमा नाचो फर्नान्डेजले गोल गर्दै रियललाई ४–३ ले अगाडी बढाए । ७९ औ मिनेटमा मारियानो डियाजले गोल गर्दै रियललाई ५–३ को जित दिलाउन सफल रहे ।